Bit By Bit - Running fanandramana - 4.6.1 Mamorona aotra miova vidiny tahirin-kevitra
Ny fanalahidin'ny fanandramana goavana dia ny hampidina ny vidin'ny fari-pivoaranao amin'ny zero. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny automation sy ny fanandramana fanandramana mahafinaritra.
Ny fanandramana dizitaly dia mety manana rafitra sarobidy be dia be, ary izany dia ahafahan'ny mpikaroka manandrana fanandramana izay tsy ho vita amin'ny lasa. Ny fomba iray hieritreretana an'io fahasamihafana io dia ny manamarika fa ny fanandramana dia manana karazan-drakitra roa: ny faktioran'ny fandaniana sy ny fandaniana miovaova. Ny fandaniana voafetra dia ny fandaniana izay tsy miova na inona na inona ny isan'ny mpandray anjara. Ohatra, amin'ny fanandraman'ny laboratoara, ny fikojakojana ny fandaniana dia mety ho ny fividianana trano sy hividianana fitaovana. Ny vidin'ny varotra , etsy ankilany, dia miova arakaraka ny isan'ny mpandray anjara. Ohatra, amin'ny fanandramana avy amin'ny laboratoara dia mety ho avy amin'ny fandoavana mpiasa sy mpandray anjara ny vidiny mitatao. Amin'ny ankapobeny, ny fanandramana analoga dia manana fandaniana ambany sy farafahakeliny avo lenta, raha toa kosa ny fanandramana nomerika dia manana fandaniana avo lenta sy ambany lenta (4.19). Na dia manana vidiny ambany aza ny diplaomihetsika dizitaly dia afaka mamorona fahafaha-miditra maro be ianao rehefa mitondra ny vidin'ny variable mankany amin'ny làlana mankany amin'ny zero.
Sary 4.19: Famoronana rafitra sarany amin'ny fanandramana analoga sy dizitaly. Amin'ny ankapobeny, ny fanandramana analoga dia manana fandaniam-bola faran'izay ambany sy farafahakeliny avo lenta, fa ny fanandramana nomerika dia manana fandaniana avo lenta sy lany ambany. Ny rafitra sarany isan-karazany dia midika fa ny fanandramana nomerika dia afaka mihazakazaka amin'ny maridrefy izay tsy mety amin'ny fanandramana analoga.
Misy singa roa lehibe indrindra amin'ny fandoavam-bola amin'ny fandoavam-bola amin'ny mpiasa sy ny fandoavam-bola amin'ny mpandray anjara - ary ny tsirairay amin'izy ireo dia azo zaraina amin'ny zero amin'ny fampiasana paikady samihafa. Ny fandoavam-bola amin'ny mpiasa dia avy amin'ny asa izay ataon'ny mpikaroka fikarohana ataon'ireo mpandray anjara, mametraka fitsaboana, ary mandrindra ny vokatra. Ohatra, ny fanandramana an-tserasera ny Schultz sy ireo mpiara-miasa (2007) momba ny fampiasana herinaratra dia nitaky ny mpikarakara ny fikarohana mba hivezivezena any an-trano mba hamerenana ny fitsaboana ary hamaky ny metaly herinaratra (4.3). Ny ezaka rehetra nataon'ireo mpanampy mpikaroka dia midika fa ny fampidirana trano vaovao ho an'ilay fianarana dia mety hampiakatra ny vidiny. Amin'ny lafiny iray, ho an'ny fanandramana nomerika ny Restivo sy van de Rijt (2012) momba ny fiantraikan'ny loka ao amin'ny editors Wikipedia, ireo mpikaroka dia afaka manampy mpandray anjara bebe kokoa amin'ny tsy misy vidiny. Toro-hevitra ankapobeny ho an'ny fampihenana ny vidin'ny fitantanam-pitantanana dia ny manolo ny asa ataon'ny olona (lafo) amin'ny asa amin'ny ordinatera (izay mora vidiana). Afaka manontany tena ianao hoe: Azonao atao ve ny manao io fanandramana io raha mbola matory ny olona rehetra ao amin'ny ekipan 'ny fikarohako? Raha eny ny valiny dia nanao asa lehibe ho an'ny automatisation ianao.
Ny karazany faharoa amin'ny vidin'ny fari-pahaizana dia ny fandoavam-bola amin'ny mpandray anjara. Ny mpikaroka sasany dia nampiasa ny Amazon Mechanical Turk sy ireo tsena hafa ao amin'ny aterineto mba hampihenana ny fandoavam-bola ilaina ho an'ny mpandray anjara. Mba hampandehanana ny vidin'ny fari-pahalalana mankany amin'ny zero, na izany aza dia ilaina ny fomba hafa. Efa ela ny mpikaroka dia nanandrana fanandramana izay tena mendri-piderana tsy maintsy mandoa ny olona handray anjara. Ahoana anefa raha afaka mamorona fanandramana izay tadiavin'ny olona ianao? Mety hitranga tampoka izany, fa hanome ohatra ho azoko etsy ambany aho amin'ny asako manokana, ary misy ohatra marobe ao amin'ny latabatra 4.4. Mariho fa ity hevitra momba ny fanandramana fanandramana mahafinaritra ity dia mamerina ny sasany amin'ireo lohahevitra ao amin'ny toko faha-3 momba ny famolavolana fanadihadiana mahafinaritra ary ao amin'ny toko faha-5 mikasika ny famolavolana ny fiaraha-miasa marobe. Araka izany dia heveriko fa ny fahafinaretan'ny mpandray anjara-izay mety ho antsoina hoe traikefa amin'ny user-dia ho ampahany manan-danja kokoa amin'ny famolavolana fikarohana amin'ny vanim-potoana nomerika.
Tabilao 4.4: Ohatra amin'ny fanandramana amin'ny vidin-tsolika zero izay nahatonga ny mpandray anjara mendrika amin'ny serivisialy azo antoka na ny traikefa nahafinaritra.
Sita ara-pahasalamana Centola (2010)
Fandaharana fanatanjahan-tena Centola (2011)
Tolo-kevitra amin'ny filma Harper and Konstan (2015)
Raha te-hamorona fanandramana amin'ny angon-drakitra vidin'ny zero, ianao dia mila miantoka fa ny zavatra rehetra dia tanteraka ary ny mpandray anjara dia tsy mitaky karama. Mba hampisehoana ny fomba hitrangan'izany dia hamariparitra ny fikarohana nataoko momba ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan'ny vokatra ara-kolotsaina.
Ny fanadihadihana nataoko dia natosiky ny fahitana ny fahombiazan'ny vokatra ara-kolontsaina. Mitondra hira, boky be mpividy, ary sarimihetsika blockbuster dia betsaka lavitra noho ny salan'isa. Noho izany, ny tsena ho an'ireo vokatra ireo dia matetika antsoina hoe "tsena mpandresy". Kanefa, amin'izay fotoana izay, ny hira manokana, ny boky na ny sarimihetsika dia ho lasa fahombiazana dia tena tsy azo antoka. Ilay mpilalao horonantsary William Goldman (1989) namintina tsara ny fikarohana akademika maro, tamin'ny filazana fa, raha ny fahitany ny fahombiazana dia "tsy misy mahafantatra na inona na inona." Ny tsy nampoizin'ny mpandresy nandresy - ny tsena rehetra dia nanontany tena ahy hoe firy ny fahombiazana dia vokatra ny kalitao ary ny habeny fotsiny dia vintana fotsiny. Sa kosa, raha oharina amin'ny fomba hafa, raha toa isika afaka mamorona tontolon'ny parlemanta ary mampivelatra ny tenany samirery, dia mety ho lasa be mpitia manerana izao tontolo izao ve ireo hira ireo? Ary, raha tsy, inona no mety ho rafitra iray miteraka izany fahasamihafana izany?
Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo, izahay-Peter Dodds, Duncan Watts (mpanolotsaina momba ny fandaharan'asa), ary izaho dia nanao andian-dahatsoratra an-tserasera. Namorona tranonkala iray antsoina hoe MusicLab izahay, izay ahafahan'ny olona mahita mozika vaovao, ary nampiasainay izany ho an'ny andiam-panandramana. Nosokajinay ireo mpandray anjara tamin'ny fampiasana ny dokambarotra an-tserasera amin'ny tranokalan'ny tanora iray (sary 4.20) ary amin'ny alalàn'ny fanamarihana ao amin'ny media. Ireo mpandray anjara tonga tao amin'ny vohikalanay dia nanome fanekena feno fanamarinana, namita ny valin'ny fanontaniana momba ny lozam-pifandraisana fohy, ary nomena an-tsitrapo ho an'ny iray amin'ireo toe-javatra roa ara-panandramana-singa tsy miankina sy sosialy. Ao amin'ny fepetra mahaleo tena, nandray anjara fanapahan-kevitra ny mpandray anjara momba ny hira izay mihaino, raha tsy ny anaran'ireo antoko sy ireo hira ihany. Raha nihaino hira iray izy ireo dia nangatahana ireo mpandray anjara mba handresy azy ireo aorian'izany dia azony atao (fa tsy ny adidy) haka ilay hira. Ao amin'ny fepetra ara-tsosialy ara-tsosialy, dia nanana traikefa mitovy ihany ireo mpandray anjara, raha tsy hoe afaka nahita koa hoe impiry ny hira no nakaran'ireo mpandray anjara teo aloha. Ankoatra izany, ny mpandray anjara amin'ny fepetra ara-tsosialy ara-tsosialy dia nomena alalana tamin'ny iray amin'ireo tontolon'ny parallèle valo, izay niorina tsirairay avy (4.21). Amin'ny fampiasana an'io lamina io, dia nihazona fanandramana mifandraika izahay. Tamin'ny voalohany, nasehonay tamin'ireo mpandray anjara tao anaty tamba-jotra tsy misy rindrina ireo hira ireo, izay nanome azy ireo famantarana malemy nalaza. Tao anatin'ny fanandramana faharoa, dia nanolotra ny hira tao amin'ny lisitry ny laharana isika, izay nanome fampahalalana mahery vaika kokoa momba ny laza (4.22).
Sary 4.20: Ohatra iray momba ny dokambarotr'ilay faneva izay nametrahan'ny mpiara-miasa amiko ny mpandray anjara amin'ny fanandramana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Salganik (2007) tamin'ny alalana avy amin'ny Salganik (2007) , sary 2.12.
Sary 4.21: Tetikasa fanandramana ho an'ny fanandramana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ny mpandray anjara dia nomena an-tsitrapo ho an'ny iray amin'ireo fepetra anankiroa: ny tsindry mahaleotena sy sosialy. Ireo mpandray anjara tamin'ny fepetra mahaleotena dia nanao safidy tsy nisy fampahalalana momba izay nataon'ny olona hafa. Ny mpandray anjara amin'ny toe-tsain'ny fiaraha-monina dia nomena alalana tamin'ny iray amin'ireo tontolon'ny parlemanta valo, izay ahitan'izy ireo ny lazany - araka ny filazan'ny lahatsoratr'ireo mpandray anjara teo aloha - ny hira tsirairay eto amin'ny tontolon'izy ireo, saingy tsy nahita na inona na inona izy ireo, na mahalala akory aza ny fisian'ny, ny iray amin'ireo tontolo hafa. Nampifanarahina tamin'ny Salganik, Dodds, and Watts (2006) , sary s1.
Hitantsika fa ny lazan'ny hira dia samy hafa eran-tany, manoro hevitra fa ny vintana dia nandray anjara lehibe teo amin'ny fahombiazana. Ohatra, ao anatin'izao tontolo izao ny hira "Lockdown" avy amin'i 52Metro dia tonga tamin'ny voalohany tamin'ireo hira 48, raha tany amin'ny tontolo hafa dia tonga tamin'ny faha 40 taonany. Izany ihany koa ilay hira izay mifanohitra amin'ireo hira hafa rehetra ihany, saingy ao amin'ny tontolo iray dia nahazo vintana izy ary tamin'ny hafa dia tsy izany. Ankoatra izany, amin'ny fampitahana ny valin'ny fanandramana roa, dia hitantsika fa ny fitomboan'ny fiaraha-monina dia mampitombo ny karazan'ireny tsenam-barotra ireny, izay mety hanatsara ny maha-zava-dehibe ny fahaiza-manao. Saingy, manararaotra ireo tontolo (izay tsy azo atao ivelan'ity karazana parlemantera ity), hitantsika fa ny fiantraikany ara-tsosialy dia nampitombo ny maha-zava-dehibe ny vintana. Ankoatra izany, mahagaga, ireo hira ireo no nanintona ny ankamaroany (4.23).
Sary 4.22: Screenshots avy amin'ny fepetra ara-tsosialy ara-tsosialy ao amin'ny fanandraman'ny (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ao amin'ny fepetra ara-tsosialy ara-tsosialy amin'ny fanandramana 1, ny hira, miaraka amin'ny isa mialoha ny fampiasana azy, dia natolotra ireo mpandray anjara narotsaka tao anaty sehatr'asa 16 \_(\_times\_) 3, izay nandefasana ny toerana misy ireo hira nomena alalana mpandray anjara. Ao amin'ny fanandramana 2, ireo mpandray anjara amin'ny fepetra ara-tsosialy ara-tsosialy dia nampiseho ireo hira, miaraka amin'ny antontam-baovaon-tsarimihetsika, naseho tao amin'ny tsanganana tokana amin'ny filaminana ambaran'ny laza malaza ankehitriny.
Sary 4.23: vokatry ny fanandramana MusicLab mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny antso sy ny fahombiazana (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ny \_(x\_) -axis dia ny fizarazaran'ny tsena ao amin'ny tontolo mahaleotena, izay manasongadina ny antso nalefan'ilay hira, ary ny \_(y\_) -axis dia ampahany amin'ny tsenan'ny hira iray ihany amin'ny ireo valo valo sosialy miisa valo, izay manasokajy ny fahombiazan'ireo hira. Hitantsika fa ny fitomboan'ny fiantraikan'ny fiaraha-monina izay niainan'ny mpandray anjara - indrindra fa ny fanovana ny fampisehoana amin'ny fanandramana 1 mba hanandramana ny fahombiazan'ny fahombiazana 2 (4.22) dia mety tsy ho azo tsapain-tanana kokoa, indrindra ho an'ireo hira miaraka amin'ny antso ambony indrindra. Nampifanarahina tamin'ny Salganik, Dodds, and Watts (2006) , faha-3.
MusicLab dia afaka nihazakazaka tamin'ny vidiny miovaova be indrindra noho ny fomba nanamboarana azy. Voalohany, ny zava-drehetra dia nomanina tanteraka mba hahafahana mandositra raha mbola natory aho. Faharoa, ny mozika dia maimaim-poana, ka tsy nisy vidim-panafahana. Ny fampiasana mozika ho fanonerana dia maneho ihany koa ny fomba indraindray ny fifanakalozana eo amin'ny fandaniana sy ny fandaniana. Ny fampiasana mozika dia nampitombo ny vidin'ny fandaniana satria tsy maintsy nividy fahazoan-dalana aho avy amin'ny tarika ary nanomana tatitra ho azy ireo momba ny fihetsehan'ny mpandray anjara amin'ny mozikany. Saingy amin'ity tranga ity, ny fitomboan'ny fandaniana mifototra amin'ny fihenanam-bidy dia ny zavatra tokony hatao; Izany no nahafahantsika nihazakazaka fanandramana izay avo 100 heny noho ny fanandraman'ny labozia.
Fanampin'izany, ny fanandramana MusicLab dia mampiseho fa ny vidin'ny fari-piainana tsy voatery dia tsy tokony ho farany amin'ny tenany; Fa, mety ho fitaovana entina karazana fanandramana vaovao izany. Mariho fa tsy nampiasa ny mpandray anjara rehetra izahay mba hikolokolo in-tserasera ny fanandramana ara-tsosialy ara-tsosialy. Raha ny tokony ho izy dia nanao zavatra hafa izahay, izay azonao eritreretina hoe mifindra avy amin'ny fanandramana ara-psikolojika ho an'ny fiarahamonina sosialy (Hedström 2006) . Tsy nifantoka tamin'ny fanapahan-kevitry ny tsirairay izahay, fa nifantoka tamin'ny fanandramanay momba ny laza, ny vokatra iombonana. Ity fiovana amin'ny vokatra iombonana ity dia midika fa nilaina ny mpandray anjara 700 mba hamoahana angon-drakitra iray (misy olona 700 ao anatin'ny tontolon'ny parallèle). Io fe-potoana io dia tsy nisy afa-tsy noho ny fandaniam-bola amin'ny fanandramana. Amin'ny ankapobeny, raha maniry ny hianatra ny vokatra iombonana amin'ny fanapahan-kevitry ny tsirairay ny mpikaroka, dia tena mampientanentana ny fanandramana vondrona toy ny MusicLab. Tamin'ny lasa, sarotra ho azy ireo izy ireo, saingy mihamahantra ireo olana ireo noho ny mety hisian'ny angon-drakitra vidin'ny zero.
Ankoatra ny fampisehoana ny tombontsoa azo avy amin'ny angon-drakitra vidin'ny zero, ny zava-bitan'ny MusicLab koa dia maneho fanamby amin'ny fomba fanao: avo lenta mafy. Raha ny zava-misy dia tena nahasambatra ahy ny nahavita niasa tamina tranombarotra iray antsoina hoe Peter Hausel nandritra ny enim-bolana teo mba hanorenana ilay fanandramana. Azo atao izany satria ny mpanolotsaina Duncan Watts dia nahazo fanampiana maromaro hanohanana ity karazana fikarohana ity. Nampivoatra ny teknôlôjia hatramin'ny nananganana MusicLab tamin'ny taona 2004 mba hanamora ny fananganana fanandramana tahaka izao. Saingy, ny tetik'ady ara-barotra avo lenta dia tsy vitan'ny mpikaroka afa-manararaotra ireo vola ireo.
Raha ny famaranana, ny fanandramana dizitaly dia mety manana rafitra sarobidy be lavitra noho ny fanandramana analoga. Raha te hanandrana karazana fanandramana tena goavana ianao, dia tokony hiezaka ny hampihena ny vidim-pifanerasanao araka izay tratra ary tsara indrindra hatramin'ny faran'ny zero. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mekanika amin'ny fanandramanao (ohatra, manoloana ny fotoana maha-olona amin'ny fotoana amin'ny ordinatera) ary mamolavola fanandramana izay tadiavin'ny olona. Ny mpikaroka izay afaka manamboatra fanandramana amin'ireo endri-javatra ireo dia afaka mitantana karazana fanandramana vaovao tsy azo atao amin'ny lasa. Na izany aza, ny fahafahana mamorona fanandramana sarobidy zero dia afaka mametraka fanontaniana vaovao momba ny etika, ny lohahevitra izay horesahiko izao.